दुईतिहाई मतको सत्तारुढ पार्टीमा अत्तालिएका अध्यक्ष प्रचण्ड - दुईतिहाई मतको सत्तारुढ पार्टीमा अत्तालिएका अध्यक्ष प्रचण्ड
नेपालबहस संवाददाता २०७५,6फाल्गुन, 11:20:57 AM
शहरमा जसको चर्चा छ –बईरी
आतंकित मानसिकताले नै त होला, प्रचण्ड हिजोआज विदेश भ्रमणमा निस्कन छोडेका छन् । १० वर्षसम्म सारा नेपालीलाई आतंकित बनाएको शक्तिका नाइके भएर आएका पुष्पकमल दाहाल ऊर्फ प्रचण्ड हिजोआज आफैं अत्तालिएका देखिन्छन् । विगतका आफ्ना कर्तुत आज मानवताविरोधी अपराधका रुपमा जागृत हुनथालेपछि उनी अत्तालिएका हुन् ।
जल्दोबल्दो बेलामा उनले तत्कालीन एमालेलाई यसरी दुत्कारेकै हुन्, “अबको निर्वाचनमा एमाओवादीको मूख्य प्रतिष्पर्धा कांग्रेससँगै हुन्छ । एमाले नामको पार्टीको सूर्य त्यही चुनावले अस्ताचलतिर पु¥याइदिने छ । एउटै मुलुकमा दुईटा कम्युनिष्ट पार्टी हुँदैनन् र हुनुहुँदैन भन्ने कम्युनिष्टको मूल्य–मान्यताले पनि हामीलाई नै सही कम्युनिष्ट पार्टी बनाएको छ । जनताले पनि हामीलाई नै सही कम्युनिष्ट भनेर चिनेको छ ।”
अकालमै छोरा मरेको सन्ताप बेग्लै छ । छोरी क्यान्सर लागेर मरेको चिन्ता बेग्लै छ । पत्नी सीता दाहाल गम्भीर रोग लागेर थला परिन् । डाक्टर, वैद्य, विप्लब सबैले छोडेर आफ्नो बाटो लागे । भएकै साथीहरूले पनि साथ दिन छोडे । बोलेको कुरा पत्याउने कोही छैन । सबैतिरबाट असुरक्षावोध हुनथालेको छ । पार्टी छिन्नभिन्न भयो । गिरिजाप्रसादको दौराको फेरो समातेर खुला राजनीतिमा आउन प्रधानमन्त्री निवासबाट प्रकट भएका प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीको हात समातेर पूर्व एमालेभित्र पसेका छन् । जल्दोबल्दो बेलामा उनले तत्कालीन एमालेलाई यसरी दुत्कारेकै हुन्, “अबको निर्वाचनमा एमाओवादीको मूख्य प्रतिष्पर्धा कांग्रेससँगै हुन्छ । एमाले नामको पार्टीको सूर्य त्यही चुनावले अस्ताचलतिर पु¥याइदिने छ । एउटै मुलुकमा दुईटा कम्युनिष्ट पार्टी हुँदैनन् र हुनुहुँदैन भन्ने कम्युनिष्टको मूल्य–मान्यताले पनि हामीलाई नै सही कम्युनिष्ट पार्टी बनाएको छ । जनताले पनि हामीलाई नै सही कम्युनिष्ट भनेर चिनेको छ ।”
तर अहिले ने.क.पा.मा पनि उनलाई चैन छैन । उनलाई भित्र्याउन ओलीले अनेक तिकडम गरे । अहिले ठेलेर बाहिरै निकालौं जस्तो गर्दैछन् । ने.क.पा. छोडेर हिँडौं भने आफ्नो टेक्ने समाउने आधार पनि रहँदैन । त्यसमाथि मानवताविरोधी अपराधको खतरा त यसै कायम छ । असुरक्षावोध भएपछि मान्छे अरुलाई झम्टिन पुग्छ । भेनेजुएला भन्ने तीन–न–तेह«को देशका लागि अमेरिका र उसका ५ भन्दा बढी मुलुकको एकमुष्ठ विरोधलाई ‘साम्राज्यवादी कू को प्रयास’ भनी बाठो भएर वक्तब्य प्रकाशित गरेपछि उनी अहिले झन् अप्ठ्यारोमा परेका छन् । कुनैबेला उनले भारतलाई त्यस्तै शैलीमा विषबमन गर्ने गर्थे ।
प्रचण्डले अवसर नपाएर आज यो हविगतमा पुगेको भन्न कुनै तर्कले मिल्दैन । उनी दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसके । आफ्ना प्रियपात्रहरूलाई छानीछानी कयौं पटक सत्तामा इज्जत र आम्दानीका आकर्षक पदहरूमा पनि पु¥याएकै हुन् । उनलाई राजनेता बन्ने अवसर धेरैपटक आएको थियो । तर प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्न नजानेर दम्भ र अहंकार प्रर्दशन गर्ने हुँदा अवसरहरू टाढा हुँदै गए । जसलाई उनले २०६९ साउन २ गते काठमाडौंमा शुरू भएको पार्टीको सातौं विस्तारित बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख नै गरेका थिए । उनले स्वीकारेका गल्तीमा– १) प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रधानसेनापति कटवाललाई कारवाही गर्नु, २) मधेश आन्दोलनलाई बुझ्न नसक्नु, ३) संविधान अनुसार ठूलो पार्टी भईसकेपछि अन्य पार्टीलाई विश्वासमा लिन नसक्नु, ४) संविधान लेखनमा संघीयतालगायत प्रमुख मुद्दा बेलैमो टुङ्गो लगाउन नसक्नु वा संविधानसभाको प्रक्रियामा लान नसक्नु, ५) शान्ति प्रक्रियामा आएपछि कार्यकर्ताहरूलाई ठीक ढंगले प्रशिक्षित गर्न नसक्नु, ६) पार्टी एकतापछि भीमकाय संगठन बनाउनु, ७) सेना समायोजनमा सहमति गर्दा लडाकुको उमेर र शिक्षामा बढी लचक हुनु, ८) पार्टीभित्र गुटबन्दी र अराजकतालाई कारवाही गर्न नसक्नु, ९) नेताहरूलाई ठीक जिम्मेवारी दिन नसक्नु, १०) सडक, सरकार र सदनको कामलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु, ११) विदेश नीति अन्तर्गत जलस्रोत, आर्थिक नीति तय गर्न नसक्नु, १२) महिला दलित लगायत पिछडिएको वर्गलाई विशेषाधिकार दिन नसक्नु ।
त्यतिमात्र होइन, प्रचण्डले आफैंले आयोजना गरेको चियापान समारोहमा आफ्नै कार्यकर्ता पदम कुँवरबाट झापड खाए । मंसिर १ गते (२०६९) माओवादीको चियापान भृकुटीमण्डपमा चलिरहेको थियो । राम्रैसँग गइराख्याथ्यो । चार बजेतिर कार्यक्रम समापन हुने अन्तिम घन्टामा एक हुल युवाहरू उनीतिर आएको उनी देखिरहेकै थिए । पहेँलो ज्याकेट लगाएको (फोटो) ३०/३२ वर्षे एउटा ठिटो पनि त्यही हुलमा थियो, नजिक पुगेर प्रचण्डसित हात मिलाउन खोज्यो, हात मिलाएपछि ड्याम्मै एक झापड हानिदियो ! उनको चश्मा झरेर फुट्यो । उनले त्यो काम देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी तत्वको षड्यन्त्र हो, त्यही केटाको आवेगमात्र होइन भन्ने अर्थ लगाए । त्यसले भित्रभित्रै यहाँ ठूलै चलखेल भइराख्या छ भन्ने उनलाई शंका लाग्न थाल्यो, आफ्नो पार्टीभित्र र बाहिर दुबैतिरबाट खतरामा रहेको उनलाई आभास हुनथाल्यो । त्यसअघि सोही भृकुटीमण्डपमा भएको सातौं प्लेनमको दोस्रो दिन २०६९ साउन ३ गते बुधबार कार्यकर्ताले प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईमाथि ‘पार्टीभित्र भ्रष्टाचार बढेको’ तथा ‘नेताहरूको विलाशी जीवनशैली एकदमै बढेर गयो’ भन्ने आक्रोशका साथ कुर्सी नै उठाएर प्रहार गरेका थिए ।
‘आश्वासनका थोक ब्यापारी’
पूरा हुनेनहुने जस्ता पनि आश्वासन दिँदै हिँड्ने, बोलीको ठेगान नभएको फटाहाको रुपमा उनको चित्रण हुनेगर्छ । उनले प्रधानमन्त्री हुँदा घोषणा गरेका थिए— “अबको एक सातापछि दाइजो प्रथालाई पूर्णतः निषेध गरिने छ । दाइजो दिने र लिने दुबै कानुनतः दण्डका भागिदार हुनेछन् । छोरोसरह छोरीलाई अंश दिने कानुन कडाइका साथ तुरुन्तै कार्यान्वयन गरिने छ । विवाह वा अरु समारोहहरूलाई किफायती बनाउन यस्ता समारोहहरूमा निश्चित संख्याभन्दा बढी मानिस सहभागी हुन नपाउने कानुन कडाइका साथ पालना गरिने छ । घरेलु हिंसालाई निषेध गर्दैजाने उद्देश्यले हरेक गाविसमा एक महिनाभित्र घरेलु हिंसा उजुरी केन्द्रहरू स्थापना गरिने छन् । छुवाछुतका अपराधलाई निर्मूल पार्न कानुनी व्यवस्था मिलाई हरेक अदालतमा छुवाछूत निवारण सेलको व्यवस्था गरिने छ । हरेक गाविसमा दलितको अनिवार्य सहभागितामा अधिकारसम्पन्न छुवाछूत अपराध निगरानी केन्द्र गठन गरिने छ ।”
मलाई त अहिले लाग्छ, नहरभन्दा तल घर भएको भए म पनि कांग्रेस पार्टीमा लाग्थेँ हुँला ।……. सुरू–सुरूमा कम्युनिष्ट बन्दा पार्टीमा सबै राम्रा मात्रै छन् जस्तो लाग्दथ्यो । तर पार्टीमा काम गर्दैजाँदा थाहा पाइयो, त्यहाँभित्र पनि भयङ्कर अवसरवादी, फटाहा र सबै प्रवृत्ति हुँदा रहेछन् । त्यहाँ पनि भीषण संघर्ष हुँदोरहेछ । कहिलेकहीँ त बुर्जुवामा हुनेभन्दा पनि रद्दी खालको संघर्ष कम्युनिष्ट पार्टीभित्र हुँदोरहेछ
यस्ता धेरै घोषणा त गरे, तर कुनै पनि पूरा गर्न सकेको देखिएन । लोडसेडिङ्बाट जनतालाई मुक्त गर्न ‘वार फुटिङ्मा काम गर्ने’ भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुरामसँग सरसल्लाह त गरे, ३५ बु“दे कार्ययोजना घोषणा पनि गरियो तर स्थिति जहाँको तहीँ रह्यो । त्यतिसम्म पनि गरेनन् । सत्तामा बसेर नयाँ नेपाल बनाउने भन्दै शान्तिपूर्ण खुला राजनीतिमा आएका प्रचण्डले सत्तामा बसेपछि आफ्ना सहयोद्धा कमरेडको सम्पत्ती मोह देखे र थानकोटको एउटा भाषणमै भनिदिए, “आर्थिक अराजकता, फजुल खर्च, भ्रष्टाचार र सुविधाभोगी चिन्तन (हाम्रो पार्टीमा) झाङ्गिदै गइरहेको छ । एउटा हिस्साले पार्टीको शक्ति र प्रतिष्ठालाई निजी हितमा दुरुपयोग गर्ने, अर्को हिस्सा दैनिक समस्या टार्न नसकेर पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । पार्टीभित्रै दुई भिन्न वर्गको अवस्था पैदा हुँदैछ । सर्वहारा मूल्य–मान्यता निकै स्खलित हुन पुगेको छ ।”
पछिल्लो चरणमा आएर उनलाई कम्युनिस्ट पार्टीप्रति नै मोहभंग हुन थालेको छ । त्यसो त सत्तारुढ ने.क.पा. को नेतृत्व त्यस्ता नेताहरूको हातमा छ, जसलाई कम्युनिज्ममाथि नै आस्था छैन । कम्युनिष्ट र अन्य पार्टीबारे प्रचण्डको यो निचोडजन्य भनाईले उनको मनोदशा प्रष्ट पार्छ, “….शुरूशुरूमा राजनीतिमा लाग्दा मैले कांग्रेस वा अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरूका बारेमा खासै विमति राख्ने गरेको थिइनँ । मलाई त अहिले लाग्छ, नहरभन्दा तल घर भएको भए म पनि कांग्रेस पार्टीमा लाग्थेँ हुँला ।……. सुरू–सुरूमा कम्युनिष्ट बन्दा पार्टीमा सबै राम्रा मात्रै छन् जस्तो लाग्दथ्यो । तर पार्टीमा काम गर्दैजाँदा थाहा पाइयो, त्यहाँभित्र पनि भयङ्कर अवसरवादी, फटाहा र सबै प्रवृत्ति हुँदा रहेछन् । त्यहाँ पनि भीषण संघर्ष हुँदोरहेछ । कहिलेकहीँ त बुर्जुवामा हुनेभन्दा पनि रद्दी खालको संघर्ष कम्युनिष्ट पार्टीभित्र हुँदोरहेछ (पछिल्लो खण्ड नयाँ पत्रिका, ०६६ को अंकबाट) ।
आज उनलाई गाली गर्नेहरू पार्टी बाहिर मनग्गे छन्, तर इष्र्या गर्नेहरू पार्टीभित्रै छन् । गाली र इष्र्यालाई मैले सहज रुपमा लिने गरेको छु त भन्छन् तर “जब आफ्नै भन्नेहरूले पनि घेराबन्दी थाल्ने स्थिति आउँछ, आफ्नै समर्थक भन्नेहरूले पनि कुरा नबुझ्ने स्थिति आउँछ, त्योचाहिँ अलि पीडादायी हुन्छ ।……जब दुश्मनका स्वरहरूसँग आफ्नै भन्नेहरूका पनि कहीँकहीँ स्वर मिलेजस्तो देखिन्छ, त्यो सबैका निम्ति पीडादायक हुन्छ” पनि भन्ने गर्छन् ।
विगतमा नेपालले भोगेका गम्भीर समस्या र सरोकारमा पनि नबोलेको मुलुकप्रति यतिबिघ्न चासो कम्युनिस्ट कित्तामा आफूलाई उभ्याउने चेष्टाबाहेक केका लागि हो ? संक्रमणकालीन न्याय संकटमा परेको र पीडितहरूलाई न्याय र परिपूरण दिएर पीडकलाई सँजाय दिएपछि मात्र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पूरा हुने भन्ने राष्ट्र संघसहित ७ मुलुकको चासोले सत्तारुढ पक्षलाई निकै पोलेको परिप्रेक्षमा यस्ता गतिविधिले प्रश्रय पाएको अनुभव हुन्छ ।
हालैमात्र उनले दक्षिणी अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलाको विषयमा अमेरिकाको कडा आलोचना गरेर समस्या पैदा गरिदिएका छन् । नेपालबाट १५ हजार किलोमिटर टाढा रहेको, नेपालसँग कुनै साइनो सरोकार तथा राष्ट्रिय हितको सवाल नगाँसिएको, कम्युनिस्ट कुशासनले बर्वाद बनाएको विवादास्पद, भ्रष्ट र मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न भएको भेनेजुएलाको सरकार भनी विश्वका पचासौं मुलुकले औँल्याएको स्थिति विपरित सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्षकै अभिव्यक्ति भविष्यको कल्पनाले उठाएको त्रासदी मात्र हो । विगतमा नेपालले भोगेका गम्भीर समस्या र सरोकारमा पनि नबोलेको मुलुकप्रति यतिबिघ्न चासो कम्युनिस्ट कित्तामा आफूलाई उभ्याउने चेष्टाबाहेक केका लागि हो ? संक्रमणकालीन न्याय संकटमा परेको र पीडितहरूलाई न्याय र परिपूरण दिएर पीडकलाई सँजाय दिएपछि मात्र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पूरा हुने भन्ने राष्ट्र संघसहित ७ मुलुकको चासोले सत्तारुढ पक्षलाई निकै पोलेको परिप्रेक्षमा यस्ता गतिविधिले प्रश्रय पाएको अनुभव हुन्छ ।
कुनै मुलुकको मामिलामा सरकारले आफ्नो धारणा वा प्रतिक्रिया दिनुभन्दा अगाडि उछिनेर सत्तारुढ पार्टीले नै वक्तब्य जारी गर्नुको नियत के हो ? लोकतन्त्रमा पार्टीको सरकार बन्छ तर सिंहदरबारमै पार्टी उपस्थित हुनुहुँदैन । ‘नेपालमा कार्यकारी राष्ट्रपति जरुरी भएको’ वकालत गर्ने ‘मदुरोपन्थी’ बाट मित्रराष्ट्रलाई चिढाएर भेनेजुएलाको नियति निम्त्याउने, द्वन्द्वकालमा भएका मानवतविरोधी अपराधका लागि संक्रमणकालीन न्यायको जिम्मेवारी पूरा गर्ने परिस्थिति आएपछि हतास र आत्मनाशको मनोवृत्तिबाट निर्देशित भएर यस्ता वक्तब्यवाजी हुनु मुलुकका लागि दुईतिहाई मत घातक अभिशाप बनाउने धृष्टता हो ।
प्रचण्डका धेरैवटा नाम छन् । उनलाई बा–आमाले दिएको नाम छविराम हो । सानो छँदा सांस्कृतिक रुपबाट यो नाम माक्र्सवादी हुन खोज्ने उनलाई कताकता नमिलेजस्तो लाग्यो र नाम फेर्ने कुरा भयो, स्कूलमा ‘पुष्पकमल’ लेखियो । पछि पार्टी (चौथो महाधिवेशन, एकता केन्द्र आदि) मा सक्रिय हुनथालेपछि ‘निर्माण’ भनियो । २०५१ सालमा पार्टीको नयाँ नामकरण नेकपा (माओवादी भएपछि) जनयुद्ध हाँक्ने बेलामा पार्टी नाम ‘प्रचण्ड’ भएको हो । उनको जन्म कास्कीको ढिकुरपोखरीमा भयो, तर २०१८ सालमा प्रचण्डको परिवार त्यहाँबाट बसाई आएर चितवनमा बस्न थाले । त्यो बेला उनी ७/८ वर्षका थिए । अब उनको निर्वाचन क्षेत्र चितवन भएको छ, जसको लागि उनले काठमाडौं–१ मा सांसद निर्वाचन लडेकी छोरी रेणुलाई हरतरहले मेयर बनाएका छन् ।
२०७५,6फाल्गुन, 11:20:57 AM